Pejy: Mpanamboatra ny teny Apple | Vaovao IPhone
Amin'ity aloha famerenana amin'ireo telo izay hataontsika mandritra ireo andro ireo (Pejy, Nomery, Fanalahidy) ho hitantsika ny paoma mpanodin-teny antsoina hoe Pages. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny tena fiasa sy ny rafitr'izy ireo ary koa ireo zavatra mahaliana na curiosities ...
Eo ambanin'ity lahatsoratra ity ihany, amin'ny fanehoan-kevitra azonao atao ny mamela ny fanontanianao momba ny fitantanana ny Pejy sy amin'ny faran'ny trilogy of reviews, dia hamoaka lahatsoratra manokana mamoaka ny fanontanianao ary ny vahaolana ho azy ireo. Mifalia!
Pages, Keynote sy Nomera dia sarany 7,99 Euro ao amin'ny App Store ho an'ny iPad / iPhone ary ny tsirairay dia ampiasaina amin'ny zavatra iray. Hitantsika izao:
Rehefa manokatra ny fampiharana izahay dia manana ireo antontan-taratasy vao haingana izay ao iCloud:
Para mamorona antontan-taratasy vaovao, tsindrio ny + izay eo ankavia havia. Tsy maintsy hanao izany isika izao mifidy iray amin'ny iombonana nomen'i Apple, nifidy ilay fotsy izahay:
Rehefa eo amin'ny taratasim-panoratana isika dia afaka manomboka amin'ny alàlan'ny fikitihana na aiza na aiza ao amin'ilay antontan-taratasy ary manoratra amin'ny fitendry (sary na sary). Azontsika atao ny mamolavola ny lahatsoratra amin'ny fampiasana ireto fiasa manaraka ireto hita amin'ity bara ity:
loharanom-baovao: Misafidy ny endritsika tadiavintsika isika amin'ny alàlan'ny fisafidianana sombin-tsoratra iray.
Bold (B), sora-mandry (I) ary misy tsipika (U)
Fanitsiana: Azontsika atao ny mifamadika eo ankavia, afovoany, havanana ary voamarina.
Indents sy kiheba
Una fisotroana ambonimbony, Afaka mahita isika:
Esory izay vita teo aloha
Fomba sy singa ao amin'ny pejy (style, list, and enumeration; and layout of element in the document)
Media: haino aman-jery, latabatra, kisary ary tarehimarika
fanahafana: Fikirana antontan-taratasy, zarao ny antontan-taratasy, ataovy pirinty na karohy ...
Andao hiresaka bebe kokoa momba ny atiny Multimedia:
Raha te-hanampy a sary, andao mankany amin'ny bokotra + avy amin'ilay bara nohazavaina etsy ambony ary misafidiana sary:
Podemos mananika izany avy amin'ny zorony:
Ary apetraho a sisin'ny fipihana eto:
Anjaranao izao, ny fanontanianao, ny fisalasalanao: Hainao ve ny mampiasa pejy? Manana fanontaniana momba ny fomba fanaovana zavatra amin'ny Pejy ve ianao? Misy fampahalalana tianao ho fantatra? Mametraha hevitra amin'ity lahatsoratra ity izay manontany momba ity fampiharana mahafinaritra ity dia hamaly anao izahay amin'ny lahatsoratra iray hafa manokana momba ity trilogy ity.
Fanazavana fanampiny - Keynote, pejy ary isa dia manavao ireo olana manamboatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Pejy: mpanodin-teny ao amin'ny Apple
Jaime Andrés Orozco dia hoy izy:
Raha manana PC aho, azoko atao ve ny manova na mamorona rakitra mifanaraka amin'ny Pejy ary ampifanarahana amin'izy ireo?
Valiny tamin'i Jaime Andrés Orozco
Apple sy Microsoft dia tsy mifanaraka tsara.
Nandinika aho ary misy vahaolana roa azo atao:
1) Raha manana Pejy amin'ny iPad ianao dia azonao atao ny manova azy ho .doc avy ao anaty ny app ary manova azy amin'ny Word. Avy eo, dia tahirintsika ny rakitra ary miaraka amin'i Zamzar dia ovaintsika ny .doc ho .pages ary averintsika ao amin'ny pejy amin'ny alàlan'ny iTunes.
2) Raha manana .doc isika dia ovainay miaraka amin'i Zamzar ary apetrakay amin'ny pejy iTunes ny iTunes.
Demian gonzalez dia hoy izy:
Ataoko amin'ny alàlan'ny iCloud izany, mamorona antontan-taratasy amin'ny pejy amin'ny iPad aho, avy eo amin'ny PC dia miditra iCloud.com aho ary avy eo dia misintona ilay rakitra ao amin'ny Word, mamita azy amin'ny PC ary mamerina izany amin'ny iPad sy iPad amin'ny alàlan'ny iCloud. avadika ho azy ho ahy io, ny olana fotsiny dia indraindray manova ny endritsoratra na ny filamin'ny antontan-taratasy izy
Valiny tamin'i Démian González
Ahoana no hanononako azy amin'ny loko mainty sy fotsy? Adala aho nitady ny fomba hanaovana azy ary tsy nahita ny fiasa na raha azo atao, dia mankasitraka betsaka aho raha azonao atao ny manazava ny fomba hanaovana azy. fiarahabana
Manana mpanonta mifanentana amin'ny AirPrint ve ianao?
Raha manana PhotoSmart Plus B12 aho
Azonao atao ny manandrana azy amin'ny alàlan'ny tweak cydia
Tsy manana iPad miaraka amin'ny Jailbreak aho, ny pitsopitsony dia hoe tsy manana safidy i Pagés? Sa AirPrint no olana?
Tsy famerenana ity fa fampianarana tsy mampino ity
Jereo, heveriko fa famerenana io, azavaiko ny ampahan'ny fampiharana ary amin'ny farany dia azavako kely ny fomba fampidirana sary sy ny fanodikodinana azy.
Raha tsy tianao izany na heverinao fa tsy famerenana izany dia afaka maneho hevitra ianao
hahaha Mifanaraka tanteraka amin'i Javi… taiza ny famerenana?
Famerenana? dia hoy izy:
Ny famerenana dia famakafakana ireo toetra mampiavaka ny singa voadinika, miaraka amin'ny tombana sy / na fanombanana isaky ny teboka, na amin'ny faran'ny iray manontolo na aorian'ny toetra tsirairay.
Io dia toa lahatsoratra fampidirana ireo pejy tsy nahomby. Ho an'izany, tsara kokoa ny mamaky ny fanampian'ny Pejy izay be pitsiny sy be pitsiny.
Saingy ny herim-po, rehefa manam-potoana bebe kokoa ianao dia afaka manao famerenana tena ary avy eo tsy hisy hilaza na inona na inona aminao. Tsy misy zavatra mitranga amin'ny tsy fahalavorariana na fahalavorariana. Olombelona isika.
Mamaly ny famerenana?
Ataovy sokitra ao ambadiky ny iPhone 5 ny laser